[08 / 12 / 2019] Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Çalışmalarında Son Durum	Ankara 06
Andro: 2 Novambra 2019
Ny talen'ny jeneraly TCDD Ali İhsan Uygun dia nitsidika ny solombavambahoaka an'ny Parti-AK AK, Trabzon, mpikambana ao amin'ny vaomiera sy teti-bolan'ny Av. Salih Cora dia nanome hafatra lehibe momba ny Tetikasa Trabzon-Erzincan. AK [More ...]
Governemanta Akbıyık nanao fanadihadiana tao amin'ny Ivotoerana Ski Hakkari; İdris Akbıyık, Governoran'i Hakkâri, dia nitsidika ny faritra misy ny ski 2.500 avo dia hita ary ny faritra misy piste 4 metatra vita amin'ny 3500 Ski Center. Governemanta Idris Akbiyik, [More ...]
Samsun Sivas lamasinina dia hanome tahiry lehibe; Ny solombavambahoaka AK Party Samsun, Orhan Kırcalı dia nilaza fa ny lalamby Samsun-Sivas-Kalın, izay ampidirina ho fanampin'ny mpandeha, haverina amin'ity volana ity, [More ...]
Rahoviana no hisokatra ny seranam-piaramanidina ao Istanbul Izany tantara
Vita amin'ny seraseran'ny seranam-piaramanidina Istanbul amin'ny taona faharoa amin'ny 2020. H. Kadri Samsunlu, filoha sy Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny seranam-piaramanidina IGA, dia nanao io fanambarana io. Birao Mpanatanteraka ao amin'ny seranam-piaramanidina IGA [More ...]
Projet Mega, St.Petersburg Hamburg High Speed ​​Line Cost 40 Billion Dollar; Nambara fa ny volavolan-dalamby hazakazaka haingam-pandeha misy eo anelanelan'i St. Petersburg sy Hamburg, Alemana dia ao anatin'ny fandaharam-potoana. Sekretera an'ny fanjakana Belarus Belarus Grigoriy Rapota, St.Petersburg-Minsk-Hamburg [More ...]
Nidina tamina fifamoivoizana ny lalana eo ambany fitarihan'antoka fiadiana; Ny kaominina ao Ankara Metropolitan dia nanafaingana ny asa fanitarana ny lalana amin'ny lafiny maro mba hanamorana ny fivezivezen'ny tanàna sy hamaha ny olan'ny fitaterana. Tarika Departemantan'ny siansa, [More ...]
Tsy nisitra ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina Istanbul androany maraina taorian'ny famonoana ny fandraharahana nitranga omaly. Manodidina ny mpiasa 300 mitangorona ao amin'ny kafe miala amin'ny asa, hoy izy ireo dia tsy hiala ny saha raha tsy efa noraisina ny fepetra ilaina. Araka ny filazan'i Evrensel, Istanbul [More ...]
Ilay atrikasa Smart City Planning Works dia hatao any Kayseri
Atrikasa Smart City Plan Workshop dia hokarakarain'ny Kaominin'i Kayseri Metropolitan. Ny atrikasa roa andro, 4-5, dia hatao ny volana novambra. Ny Kaominina Metropolitan dia mikarakara atrikasa hanairana ny saina amin'ny Smart Urbanism. 4-5 Novambra [More ...]
Teo am-pihainoana mozika dia namoy ny ainy ilay vehivavy tratry ny fiaran-dalamby; Nilgün Çolak (38), izay voalaza fa mandeha amin'ny fihainoana mozika amin'ny headphone ao amin'ny distrikan'i Ceyhan ao Adana, dia tsy nahatsikaritra ny lamasinina fikojakojana ny lalamby ary tratran'ny lamasinina. [More ...]
Ireo tsy manana Manisa Card Visa Attention; MANULAS INC. ho an'ny olom-pirenena tsy afaka manao karatra Manisa, visa ary fifanakalozana vaovao karatra miaraka amin'ilay fanambarana natao nandritra ny herinandro, [More ...]
Androany ao amin'ny tantara 2 Novambra 1918 Ny komandin'ny tafika mitselatra Mustafa Kemal Pasha, any amin'ny faritra misy azy dia namoaka baiko momba ny lalamby; Ireo lalamby any atsimo ka hatrany Konya dia ekena ao anatin'ny faritra andraikitry ny vondrona Lightning Armies [More ...]